သတင်း - Jinghe New City Culture & Art Center ၏ Schematic Design for International Competition
Jinghe New City Culture & Art Center ၏ Schematic Design အတွက် နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲ
Jinghe မြို့သစ်၊ Xixian New Area၊ Shaanxi ပြည်နယ်
Shenzhen Ehow R&D စင်တာ
Daisy +86-13312968676 (ဘေဂျင်းအချိန်၊ တနင်္လာနေ့မှသောကြာနေ့၊ 9:00-18:00)
Jinghe New City Culture & Art Center Project သည် Jinghe New City ရှိ Binhe 1st Road ၏မြောက်ဘက်၊ Huanhu လမ်းအရှေ့ဘက်၊ Hubin 4th Road နှင့် Jinghe 7th Street ၏ အနောက်ဘက်တွင် တည်ရှိသည်။Jinghe Avenue သည် နယ်နိမိတ်အဖြစ် တည်ရှိပြီး မြောက်-တောင်ကို ပိုင်းခြားထားသည်။Jinghe Avenue ၏မြောက်ဘက်တွင် မြေကွက်သည် Phase I အတွက် JG04-32B ဖြစ်ပြီး၊ Phase II အတွက် JG04-128 မြေကွက်ဖြစ်သည်။
အဆင့် ၁ မြေယာ JG04-32B အတွက် စီမံကိန်းအညွှန်းများ- မြေဧရိယာသည် 8802 စတုရန်းမီတာ (၁၃.၂၀ မီလီမီတာခန့်)၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ (A2) အတွက် အသုံးပြုသည်၊၊ အကြို FAR မှာ 1.3 (ဒေါင်လိုက်ဒီဇိုင်းသည် မြေပြင်အထက်5မီတာ ကွာသည် ။ ±0၊ 0-5m ရှိ နေရာကို မြေအောက် အာကာသအဖြစ် သိမ်းယူသည်၊ ယာဉ်ရပ်နားရန်နေရာ၊ အရပ်ဘက်လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးနှင့် အခြားသော အဆောက်အဦများကို FAR တွက်ချက်မှုတွင် မပါဝင်ဘဲ၊ စီးပွားရေးနှင့် အခြားသော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု အဆောက်အဦများကို FAR တွက်ချက်မှုတွင် ထည့်သွင်းထားသည်) နှင့် အဆောက်အဦသိပ်သည်းဆသည် 40% ထက်နည်းသော သို့မဟုတ် ညီမျှသည် (±0 ဖြင့်သတ်မှတ်ထားသည့်5မီတာထက်ပိုမြင့်သောအမြင့်တွင်တွက်ချက်သည်)။စိမ်းလန်းမှုသည် ၃၅% ထက်ကြီးသည် သို့မဟုတ် ညီမျှသည်။
Phase I land အနီးတစ်ဝိုက်ရှိ မြေများအတွက် အညွှန်းများ JG04-32B-
မြေကွက် JG04-32A: မြေသည် စီးပွားဖြစ်မြေ (B1) ဖြစ်သည်။0-5m တွင် စီမံကိန်းအညွှန်းများ- FAR≤0.7၊ အဆောက်အဦသိပ်သည်းဆ≤50% (ဒေါင်လိုက်ဒီဇိုင်းသည် ±0 အဖြစ် မြေပြင်အထက် 5m ကြာမြင့်သည်၊ 0-5m ရှိ နေရာများကို ကားပါကင်၊ အရပ်ဘက်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးနှင့် အခြားသော အဆောက်အဦများအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။ FAR တွက်ချက်မှုတွင် မပါဝင်သော်လည်း၊ စီးပွားဖြစ်နှင့် အခြားသော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများကို FAR တွက်ချက်မှုတွင် ထည့်သွင်းထားသော်လည်း) greenage≥25%;5m အထက် စီမံကိန်းအညွှန်းများ- FAR≤0.1၊ greenage≥75%။B1 စီးပွားဖြစ်မြေ၏ စုစုပေါင်းအဝေးသည် 1.2 ဖြစ်သည်။အနာဂတ်အဆင့်အတွက် ရံပုံငွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်ဖြစ်သည်။
မြေယာ JG04-32C- မြေယာကို အများသူငှာ စိမ်းလန်းသောမြေ (G1)၊ FAR≤0.1 နှင့် စိမ်းလန်းသောမြေ ≥75% အဖြစ် အသုံးပြုသည်။
အဆင့် II မြေယာ JG04-128 အတွက် စီမံကိန်းအညွှန်းများ- မြေဧရိယာသည် 12271 စတုရန်းမီတာ (18.40mu ခန့်)၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ (A2) အတွက် အသုံးပြုထားသည့် မြေယာဖြစ်ပြီး၊ အကြို FAR မှာ 1.2 (ဒေါင်လိုက်ဒီဇိုင်းသည် မြေပြင်အထက်5မီတာ ကွာသည် ±0၊ 0-5m ရှိ နေရာအား မြေအောက်နေရာအဖြစ် သိမ်းယူသည်၊ ယာဉ်ရပ်နားရန်နေရာ၊ စက်ပစ္စည်းများနှင့် အခြားပစ္စည်းများကို FAR တွက်ချက်မှုတွင် မပါဝင်ဘဲ၊ စီးပွားဖြစ်နှင့် အခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာများကို FAR တွက်ချက်မှုတွင် ထည့်သွင်းထားသည်)၊ အဆောက်အအုံသိပ်သည်းဆသည် ထက်နည်းပါသည်။ သို့မဟုတ် 40% နှင့်ညီမျှသည်။စိမ်းလန်းမှုသည် ၃၅% ထက်ကြီးသည် သို့မဟုတ် ညီမျှသည်။
Phase II အနီးတစ်ဝိုက်ရှိ မြေယာအညွှန်းများ JG04-128
မြေယာ JG04-127-1- မြေကို အများသူငှာ စိမ်းလန်းသောမြေ (G1)၊ FAR≤0.1 နှင့် greenage≥75% အဖြစ် အသုံးပြုသည်။
မြေယာ JG04-127-2- မြေကို အများသူငှာ စိမ်းလန်းသောမြေ (B1) အဖြစ် အသုံးပြုသည်။0-5m တွင် စီမံကိန်းအညွှန်းများ- FAR≤0.7၊ အဆောက်အဦသိပ်သည်းဆ≤50% (ဒေါင်လိုက်ဒီဇိုင်းသည် ±0 အဖြစ် မြေပြင်အထက် 5m ကြာမြင့်သည်၊ 0-5m ရှိ နေရာများကို ကားပါကင်၊ အရပ်ဘက်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးနှင့် အခြားသော အဆောက်အဦများအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။ FAR တွက်ချက်မှုတွင် မပါဝင်သော်လည်း၊ စီးပွားဖြစ်နှင့် အခြားသော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများကို FAR တွက်ချက်မှုတွင် ထည့်သွင်းထားသော်လည်း) greenage≥25%;5m အထက် စီမံကိန်းအညွှန်းများ- FAR≤0.1၊ greenage≥75%။
1. Jinghe Avenue ၏ မြောက်ဘက်နှင့် တောင်ဘက်ရှိ မြေကွက်များ၏ သုံးဖက်မြင်လမ်းကြောင်း ချိတ်ဆက်မှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်ဖြစ်ပြီး အမြင့် 5.5 မီတာထက် မနည်းရှိမည်ဖြစ်သည်။
2. အစီအစဥ်ကို အဆင့်ဆင့်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့် တစ်စုတစ်စည်းတည်း ဒီဇိုင်းရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
3. ဒီဇိုင်းဘောင်များသည် နောက်ဆုံး ပြဌာန်းထားသော အစီအစဉ်ရေးဆွဲမှု အခြေအနေများအတွင်း ဖြစ်ရမည်။
ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာစင်တာ၏ အဓိကပရိုဂရမ်များတွင် စာကြည့်တိုက်၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာစင်တာ၊ ရုပ်ရှင်ရုံ၊ ဂီတ၊ အက၊ ရိုးရာဒရာမာတင်ဆက်မှု၊ ခေတ်သစ်ဒရာမာ၊ လက်ရေးလှပန်းချီနှင့် ပန်းချီအနုပညာပြပွဲနှင့် အခြားသော အပန်းဖြေမှု၊ အစားအသောက်နှင့် အပန်းဖြေမှုဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမှုများ ပါဝင်ပါသည်။
အဓိက ဒီဇိုင်းနယ်ပယ်- ပြိုင်ပွဲ၏ အဓိက ဒီဇိုင်းနယ်ပယ်မှာ Phase I JG04-32B နှင့် Phase II JG04-128 ၏ A2 နယ်မြေနှစ်ခု၏ ဗိသုကာနှင့် အခင်းအကျင်း ဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။
အယူအဆဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းနယ်ပယ်- ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာစင်တာတစ်ခုလုံးကို တည်ဆောက်ပြီး ခြုံငုံချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုအဖြစ် ဖန်တီးရန်အတွက် JG04-32A၊ JG04-127 နှင့် JG04-32C နှင့် ရှုခင်း-လမ်းဖြတ်လမ်းများအတွက် ဒီဇိုင်းပုံစံသည် လိုအပ်သည် Jinghe ရိပ်သာလမ်းပေါ်ရှိ
Jinghe New City Culture & Art Center ၏ ဒီဇိုင်းပုံစံ။တိကျသော ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်များသည် Jinghe New City Culture & Art Center ၏ ဒီဇိုင်းအကျဉ်းချုပ် နိုင်ငံတကာ ပြိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းအကျဉ်းကို ဒုတိယအဆင့်တွင် ထုတ်ပြန်မည်ဖြစ်သည်။
(၁) ဤပြိုင်ပွဲအတွက် ဒီဇိုင်းအေဂျင်စီများအတွက် အရည်အချင်းကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။သက်ဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းအတွေ့အကြုံရှိသော ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ ဒီဇိုင်းအေဂျင်စီများ (လွတ်လပ်သောတရားဝင်အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများကို လွတ်လပ်စွာထမ်းရွက်နိုင်သော အခြားအဖွဲ့အစည်းများ) လျှောက်ထားနိုင်သည်။လုပ်ငန်းစုတစ်ခုအနေဖြင့် လျှောက်လွှာကို လုပ်ငန်းစုအဖွဲ့ဝင်2ဦးထက်မပိုဘဲ ခိုင်မာသောမဟာမိတ်များနှင့် ဖြည့်စွက်အားသာချက်များကို ဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုထားသည်။ထို့အပြင်၊ လုပ်ငန်းစုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးစီသည် မိမိကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် မတူညီသော လုပ်ငန်းစုတစ်ခုအား အခြားဒီဇိုင်းအေဂျင်စီများနှင့် ပူးပေါင်းခြင်းဖြင့် ပွားထားသော လျှောက်လွှာများကို ပြုလုပ်ခွင့်မပြုပါ။
(၂) ပြတိုက်၊ အနုပညာပြခန်း၊ ပြပွဲခန်းမ၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာပြတိုက်၊ စာကြည့်တိုက်၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာပြခန်းစသည်ဖြင့် အများသူငှာ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံကြီးများတွင် အတွေ့အကြုံရှိသော ဒီဇိုင်းအေဂျင်စီများကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၃) တစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် တစ်ဦးချင်းအဖွဲ့မှ လျှောက်လွှာများကို ဤပြိုင်ပွဲတွင် လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။
(၄) ဤပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်သည့် ဒီဇိုင်းဝန်ထမ်းများအား လျှောက်လွှာတင်သွင်းသည့် ဒီဇိုင်းအေဂျင်စီတွင် မှတ်ပုံတင်ရမည်။
(၅) လျှောက်ထားသူသည် ယှဉ်ပြိုင်မှုစာရွက်စာတမ်း လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ အရည်အချင်းပြည့်မီသော လျှောက်လွှာများကို ပံ့ပိုးပေးရမည်။
(၆) လျှောက်ထားသူသည် ဇန်န၀ါရီလ (၂၀) ​​ရက်နေ့ (ပေကျင်းစံတော်ချိန်) 15:00 မတိုင်မီ သတ်မှတ်ထားသောနေရာသို့ လျှောက်ထားသူသည် အရည်အချင်းပြည့်မီသော လျှောက်လွှာများကို တင်သွင်းကာ အောက်ပါဝဘ်ဆိုဒ်သို့ ဝင်ရောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အချက်အလက်များကို လော့ဂ်အင်ဝင်ရန်နှင့် မှတ်ပုံတင်ရန် QR ကုဒ်ကို စကင်န်ဖတ်ရမည်။ သတ်မှတ်နောက်ဆုံးအချိန်:
ဤပြိုင်ပွဲကို အဆင့်နှစ်ဆင့် ခွဲခြားထားပြီး 1st stage – prequalification , 2nd stage – ဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲ။
ပထမအဆင့် - အရည်အချင်းစစ်
အိမ်ရှင်သည် အရည်အချင်းပြည့်မီသော ကော်မတီတစ်ရပ်ကို ဖွဲ့စည်းပြီး လျှောက်ထားသူများ တင်ပြသော အရည်အချင်းပြည့်မီသော လျှောက်လွှာစာရွက်စာတမ်းများကို ပြည့်စုံစွာ ပြန်လည်သုံးသပ်မှု ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်အကြောင်းအရာတွင် လျှောက်ထားသူ၏ လုပ်ငန်းဂုဏ်သတင်း၊ ပရောဂျက်စွမ်းဆောင်ရည်၊ ဆုများနှင့် ပရောဂျက်ရှိ အဆိုပြုထားသောအဖွဲ့တို့ ပါဝင်ပါသည်။အရည်အချင်းပြည့်မီမှုကော်မတီသည် ဒုတိယအဆင့်သို့ဝင်ရောက်ရန် အဖွင့်မဲစနစ်ဖြင့် ဆန်ကာတင်စာရင်းဝင်အေဂျင်စီ3ခုကို ရွေးချယ်ထားသည်။တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ အစားထိုးပါဝင်သည့်အေဂျင်စီ2ခု (အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဖြင့်) ကို ရွေးချယ်ပြီး ဆန်ကာတင်စာရင်းဝင်အေဂျင်စီများ နုတ်ထွက်သည့်အခါတွင် အခြားအေဂျင်စီများကို အစားထိုးမည်ဖြစ်သည်။
ဒုတိယအဆင့် - ဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲ
ဆန်ခါတင်စာရင်းဝင်အေဂျင်စီ3ခုသည် Design Brief ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသော တရားဝင်ပေးပို့နိုင်သောပစ္စည်းများကို တင်ပြပါမည်။အစီအစဥ်ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးကော်မတီသည် အစီအစဉ်သုံးရပ်ကို အဆင့်သတ်မှတ်ရန်နှင့် ပထမနေရာအစီအစဥ်တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ရန် အကြံပြုချက်များကို တင်ပြရန်အတွက် အဖွင့်မဲပေးသည့်နည်းလမ်း (တစ်ကျော့ပြန်မဲပေးခြင်း) ကို လက်ခံပါသည်။ပထမနေရာသည် ဤပရောဂျက်၏အနိုင်ရရှိသူဖြစ်ပြီး နောက်ဆက်တွဲပရောဂျက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစာချုပ်ဖြင့် ချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ပြီး ဒုတိယနှင့် တတိယနေရာများမှာ သက်ဆိုင်ရာ ဘောနပ်စ်များကို အသီးသီးရရှိမည်ဖြစ်သည်။
မှတ်ချက်- ဖော်ပြခဲ့သည့်အချိန်သည် ပေကျင်းအချိန်ဖြစ်သည်။အစီအစဉ်ကို ချိန်ညှိရန် အိမ်ရှင်သည် လက်ဝယ်ရှိသည်။အချိန်ဇယား ချိန်ညှိမှုကိစ္စတွင်၊ အိမ်ရှင်သည် ပါဝင်သူများအား အီးမေးလ်မှတစ်ဆင့် အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆက်တွဲ ပရောဂျက် ဒီဇိုင်းဖွံ့ဖြိုးရေးကြေး၏ အထက်ကန့်သတ်ချက်မှာ RMB20 သန်း (ဆုကြေးငွေ RMB2.60 သန်း အပါအဝင် အခွန်အပါအဝင်) ဖြစ်ပြီး ဆန်ကာတင်ပါဝင်သူများသည် နောက်ဆက်တွဲ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း၏ အကြောင်းအရာအပေါ် အခြေခံ၍ ကိုးကားချက်ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ပွဲစီစဉ်သူသည် ပထမနေရာအနိုင်ရရှိသူနှင့် စီးပွားဖြစ်ညှိနှိုင်းမှုပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး အမှန်တကယ်ညှိနှိုင်းမှုရလဒ်အပေါ်အခြေခံ၍ နောက်ဆက်တွဲအစီအစဉ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးမည်ဖြစ်ပြီး၊ မြေနယ်နိမိတ်အတွင်း ဗိသုကာပုံစံဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းအပါအဝင် အလုပ်အကြောင်းအရာဖြင့် (စီမံကိန်းအတွက် ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုချက်အတိုင်းအတာအထိ၊ ဗိသုကာ ဒီဇိုင်းသည် ဒီဇိုင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အတိုင်းအတာအထိ)၊ ဆောက်လုပ်ရေး ရေးဆွဲစဉ်အတွင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ ဆောက်လုပ်ရေး အဆင့်အတွင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် အခြား အတိုင်ပင်ခံ လုပ်ငန်းတို့ ဖြစ်သည်။
9.3 ဤပြိုင်ပွဲ၏ ဒီဇိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခကြေးငွေနှင့် အပိုဆုကြေးများကို RMB ဖြင့် သတ်မှတ်ပေးပါသည်။လက်ခံရရှိသော အခကြေးငွေများမှ ထွက်ပေါ်လာသော အခွန်များကို ပါဝင်သူများမှ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ပွဲစီစဉ်သူ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် တရုတ်ပြည်တွင်းအခွန်ပေးချေမှု ပြေစာများကို ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ပြိုင်ပွဲရလဒ်များကိုကြေငြာပြီးနောက် သက်ဆိုင်ရာငွေပေးချေမှုပုံစံများကို ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆက်တွဲ ပရောဂျက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စာချုပ်နှင့် ဘောနပ်စ်ငွေပေးချေမှု သဘောတူညီချက်၏ နမူနာပုံစံများကို ဒုတိယအဆင့်တွင် ဒီဇိုင်းအကျဉ်းချုပ်နှင့်အတူ ဆန်ကာတင်စာရင်းဝင်သူများအား ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်သည်။
9.4 ပါဝင်သူသည် လုပ်ငန်းစုတစ်ခု၏အမည်ဖြင့် ဤပြိုင်ပွဲကိုတက်ရောက်ပါက၊ စီစဉ်သူသည် ငွေပေးချေမှုသဘောတူညီချက် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းစုအဖွဲ့ဝင်များနှင့် စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးမည်ဖြစ်သည်။နိုင်ငံခြား ဒီဇိုင်းအေဂျင်စီတစ်ခုသည် ၎င်း၏အကောင့်မှတစ်ဆင့် RMB ကို မစုဆောင်းနိုင်ပါက၊ ၎င်းသည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ တရားဝင်နှင့် လွတ်လပ်သော တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအား ငွေပေးချေမှုကိုယ်စား ကောက်ခံရန် ခွင့်ပြုနိုင်သည်။
9.5 အစီအစဉ်ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးကော်မတီသည် ပါဝင်သူထံမှတင်ပြချက်များသည် ဤပြိုင်ပွဲ၏ ဒီဇိုင်းအတိုင်းအတာနှင့် လိုအပ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီကြောင်း ယုံကြည်ပါက၊ အိမ်ရှင်သည် ၎င်းအား ဘောနပ်စ် သို့မဟုတ် ဒီဇိုင်းလျော်ကြေးငွေ ပေးဆောင်မည်မဟုတ်ပါ။
9.6 ဤပြိုင်ပွဲတွင်ပါဝင်သူသည် ၎င်း၏ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကို (ခရီးနှင့်နေရာထိုင်ခင်းစရိတ်အပါအဝင်) ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ပြိုင်ပွဲအချက်အလက် စုံစမ်းမေးမြန်းရန် ဝဘ်ဆိုဒ်များ
Shaanxi Xixian New Area Jinghe New City ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၏ ဝဘ်ဆိုဒ်
Xixian New Area Jinghe New City Industrial Development Group Co., Ltd. ၏ ဝဘ်ဆိုဒ်
အတွင်းခန်း 3d Rendering ဝန်ဆောင်မှုများ Rendering Engine Architecture ၃ ထပ် လူနေ အဆောက်အဦ ဒီဇိုင်း ရေးဆွဲခြင်း။ Virtual Architect ဂိမ်း ဗိသုကာ အတွင်းခန်း Render စီးပွားဖြစ် လက်လီလက်လီအတွင်းခန်းဒီဇိုင်း တင်ဆက်ခြင်း။